Cheese feminized mbeu | MyWeedSeeds.com
Mhedzisiro: yakasimba yakajeka asi stoney yakakwira
Cheese feminized mbanje inoratidzira chiratidzo chakayambuka chisinganzwisisike mavambo icho chakakunda mbanje yeBritish kukura nzvimbo kweanopfuura makore gumi nemashanu. Kwenguva yakareba, fomura yake yaive yakachengetedzwa kwazvo zvekuti hapana aigona kutenga mbeu, asi ikozvino unogona! Cheese mbanje chirimwa chine simba, chiri pakati nepakati, chakakura-matavi chine bundu rakakura kusvika pamashizha. Iye achaburitsa hombe yepakati cola (yepamusoro bud) inofashukira neTC makristasi uye inonamira resin. Nekuchengetwa kwakakodzera, goho rake rine mukurumbira. Anogona kukura panze, asi maruva pakutanga mukati. Kuwanda kwake kunoita kuti rive rakakura kugungwa regirini (SOG) masisitimu. Novice uye vekutanga-nguva varimi vakaita saiye, sezvinoita varimi vekutengesa uye connoisseur. Sezvaungangofungidzira, Cheese mbanje inodyara inoburitsa yakasimba, musky cheddar chizi hwema (ine mupendero wehuni). Iko kunhuwira uye hutsi hwakasimba, asi kwete zvakanyanya, iine pasi pechikamu che spice uye skunk. Kukwirira kwaro kunogara kwenguva refu, pfungwa yekufara inovaka zvinofadza kwazvo.
Cheese Autoflowering Mbeu dzechikadzi
Cheese nguva dzose mbeu
Cheese mbanje mbanje
California Kurota Mukadzi
Mbeu dzevakadzi veAfghan
Chibereko Chisina Kurambidzwa Auto Maruva
More info Auto RuvaVakadzi
Waikiki Mambokadzi feminized
Crystal Mvura Yakafemerwa